China ice cream cpu Kugadzira uye Fekitori | JAHOO
makapu emapepa, Akakwana kofi, chokoreti inopisa kana chero chimwe chinwiwa chinopisa kana chinotonhora, Yakakwana kumba kana kushandiswa kwekutengesa. Inokodzera Milk tii shopu, soya bhinzi shopu chitoro, inotonhora zvitoro, inokurumidza-chikafu maresitorendi, kofi shopu Dessert House Hotera, resitorendi, kumba uye zvakasiyana siyana zvevaraidzo, Yakakwira tembiricha ...
makapu emapepa, Akakwana kofi, chokoreti inopisa kana chero chimwe chinwiwa chinopisa kana chinotonhora, Yakakwana kumba kana kushandiswa kwekutengesa. Inokodzera chitoro cheMukaka tii, shopu yemukaka wesoya, zvitoro zvinotonhora, maresitoreti anotengesa chikafu, kofi shopu Dessert House Hotel, resitorendi, pamba uye zvakasiyana siyana zvevaraidzo,
Kupisa kwakanyanya kwe100 DEG C, hapana kuvuza, hapana kunhuwa, hapana nyore kushanduka.
Pepa makapu & lids kutaurwa
8oz kapu inopisa
10oz kapu inopisa
12oz kapu inopisa
16oz kapu inopisa
20oz kapu inopisa
22oz inopisa mukombe
Lids yemapepa makapu
kukwana 8oz dome muvharo
Inokodzera 12 ~ 22oz muvharo wakadzika
kukwana 12 ~ 22oz dome muvharo
Imwe madziro / Ruviri rusvingo / Ripple rusvingo
Chikafu chegumi 100% mhandara bepa
Flexo kudhinda / offset kudhinda neyekudya giredhi inki
Logo uye dhizaini zvinogamuchirwa noushamwari
T / T; L / C, nezvimwewo
Mahara sampuli inogona kuwanikwa
1.Virgln bepa rine FSC & PEFC certification.Products pamwe FDA, LFGB, COC chitupa.
2.Flexo Priting neyekudya-giredhi inki.Provide yakagadzirirwa dhizaini uye kurongedza.
Fekitori yedu inogona kupa ese marudzi ese ezvigadzirwa zvaunoda.
4.Fekitori yedu inobata zvivakwa zvitatu zvitsva, inova mikombe mikuru yemapepa inogadzira iri pakati peChina, iyo inovhara nzvimbo ye46 maeka.
5.Our fekitori inobata michina miviri yekudhirowa PE, michina mina yekudhinda, makumi masere epakati michina, makumi mana ekumhanyisa michina uye vanopfuura vashandi ve400, ine isina guruva chirimwa.
6.Three ndeye Strict mhando kudzora uye chigadzirwa mhando traceablity.
7.Tinogona kuita yemhando yeimwe chigadzirwa chiyero.
Zvadaro: lunch box
16oz Tsika Logo Kudhinda Pepa Frozen Yogurt C ...